Koofiyadaha iyo koofiyadaha → Dharka shaqada • xirfadlaha daabacaadda kombuyuutarka P&M
Koofiyadaha iyo muruqyada waa qayb ka mid ah qalabka BHP looga baahan yahay goobaha shaqada khatarta oo kordhay. Waa nolol iyo badbaadin caafimaad.
Alaabada laga heli karo pm.com.pl waxaa keena shirkado sumcad leh. Kala duwanaansho ballaaran ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud u doorato wax ku habboon shaqada. Waxaan hubinaa inaan si joogto ah ugu kobcinno dalabkeena alaabooyin cusub.
Dalabkeenna Waxaan ku ballaarinnay balaclavas gaar ahaan faa'iido leh xilliga qaboobaha, garbasaarrada buushashka, koofiyadaha kuugga, gaashaanka wajiga, koofiyadaha mesh ee warshadaha cuntada iyo kuwa kale. Waad ku mahadsantahay wada shaqeynta joogtada ah ee lala yeesho soo saarayaasha iyo amarro aad u tiro badan, waxaan awoodnaa inaanu soo bandhigno qiimo soo jiidasho leh iyo xulasho ballaadhan, iyo qiimo dhimis dheeraad ah oo loogu talagalay macaamiisha caadiga ah.
Koofiyadda badbaadada, koofiyadda badbaadada
Koofiyadaha loogu talagalay raaxada iyo badbaadada
Koofiyadaha waa lala qabsan karaa baahiyahaaga maaddaama ay leeyihiin walxo hagaajin ah oo kuu oggolaanaya inaad kula jaanqaaddid baahiyahaaga. Dabacsanaanta noocan ah ee koofiyadaha ayaa loo tarjumay raaxaysi iyo badbaado.
Koofiyadaha aan sida wanaagsan u xirnayn, xilligan ay saamaynta ku jirto, tusaale ahaan xagga sare, si fudud ayey hoos ugu dhici kartaa, iyadoo madaxa u soo bandhigeysa dhaawacyo halis ah. Waxaan bixinaa moodello badan oo midabbo kala duwan leh. Waxyaabaha laga sameeyo koofiyadaha ayaa u adkaysata saamaynta taban ee arrimaha dibedda, mana jirin wax isku-dhafan oo sun ah oo loo adeegsaday in la sameeyo.
Koofiyadaha difaaca ee xilli kasta
Dukaankayaga, waxaan ku bixinaa si adag oo loo sameeyay oo qurux badan in la xidho koofiyadaha ilaalinta dhumucyo kala duwan oo ku habboon xilliyado kala duwan. Xilliga gu'ga iyo xagaaga, waxaan kugula talineynaa daboollo fudud oo si wax ku ool ah uga ilaaliya qorraxda daran.
Xilliga jiilaalka, gaar ahaan heerkulka aadka u hooseeya, koofiyadaha diirran ee si hufan u daboolaya kuleylka madaxa ayaa qumman. Waxaan kula talinaynaa iyaga kuwa ugu fiican dadka ka shaqeeya banaanka xaaladaha cimilada adag. Waxaan haynaa moodellada haweenka iyo ragga ee aan kala dooran karno, taas oo fududeynaysa xulashada alaabada.
Kuwa raadinaya koofiyadaha fudud ee ilaaliyaha oo u eg dabool leh muuqaal, waxaan leenahay xulasho noocyo ah soosaarayaasha JSP iyo REIS.
Sidaas iftiin koofiyadaha waxay bixiyaan difaac aasaasi ah oo ka dhan ah waxyaalaha adag. Dhexda waxaa ku jira gal ah oo ka sameysan HDPE ama ABS caag ah oo leh nidaam nuugista shoogga, oo lagu daray waxyaabo loogu talagalay raaxada sii kordheysa.
Koofiyadaha waxay leeyihiin godad hawo-qaadasho, xarkaha hagaajinta, iyo jeebabka gudaha ayaa kuu oggolaanaya inaad ka saarto qalabka adag, taas oo kuu oggolaaneysa inaad dhaqdo daboolka ama aad calaamadeyso daabacaadda kombiyuutarka.
Koofiyadda badbaadada khafiifka ah, oo lagu xoojiyay daabac
koofiyadaha shaqada cadkoofiyadaha shaqadakoofiyadaha shaqada leh muuqaalkoofiyadaha shaqada xilliga qaboobahakoofiyadaha baseballkoofiyadaha shaqada jiilaalka raggakoofiyadaha shaqada jiilaalkakoofiyadaha shaqadakoofiyadaha badbaadada shaqada ee eslokoofiyadaha shaqadamidabada koofiyadaha shaqadakoofiyadaha shaqada olxkoofiyadaha shaqada